Indlu kwilali yaseThai ngokwenene
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguPranom
Indlu inezibane ezaneleyo kunye nezixhobo zombane. Iveranda enkulu inezibane kunye neshawari yangaphandle enendlu yangasese.
Ikhitshi lixhotyiswe ngokupheleleyo kubandakanya ifriji, isitovu segesi kunye nezixhobo zokupheka. Awukwazi ukusela amanzi, kodwa ekoneni ungathenga iibhotile ezili-10 evenkileni.
Akukho air conditioning kodwa kukho abalandeli. Phantsi kweveranda kukho izitulo zokuhlala ngaphandle. Kukho itafile yasekhitshini enezitulo ezi-4. Ayikho enye ifanitshala efana nebhedi kunye netafile yekofu.
Indlu ikwilali encinci yokwenyani yaseThai iPrasat Nong Bua Rai. Kule ndawo kukho izinto ezahlukeneyo ezinje ngeetempile kunye nezakhiwo zakudala zaseKhmir. Kwidolophana kukho iindawo zokutyela ezimbalwa, izindlu ezimbalwa zekofu zendawo kunye neevenkile ezincinci apho unokwenza khona ukuthenga kwakho kwemihla ngemihla.
Phanom Rung Historical park imalunga nemizuzu eli-10 ukusuka endlwini. Kwilali ngokwayo kukho inxiwa endala yeKhmir iPrasat Nong Bua rai. IPrasat Muang Tum ikude ngeekhilomitha ezi-5 kwaye iPrasat Ban Bu ikumgama weekhilomitha ezi-2. Ngapha koko, kukho iitempile ezininzi, amasimi erayisi, iilali ezincinci kunye nedolophu yasePrachonchai kule ndawo.
Iikhilomitha ezingama-50 kude likomkhulu iBuriram kunye neChang International Race Circuit kunye nebhola ekhatywayo yaseBuriram United.
Umbuki zindwendwe ngu- Pranom
Sisoloko sifumaneka kwaye kusoloko kukho umntu okufutshane onokunceda okanye acacise izinto.
Iilwimi: Nederlands, English, ภาษาไทย